[Uhlobo]: Uhlobo lwendebe yohlobo lweFolding [Ukusetyenziswa]: Yinxibe njengenkungu kunye nomsi, ukuphuma emotweni, ikhitshi, njl. Njl. [Umsebenzi]: Hlunga ngokufanelekileyo zonke iintlobo zamasuntswana emoyeni. [Sineziqinisekiso]: I-FDA / i-CE / Inxalenye yenxalenye ye-NIOSH [Ixesha]: Ukungcoliswa komoya-iiyure ezingama-40, ungcoliseko olunobungangamsha-iiyure ezingama-30, ungcoliseko olunzima-iiyure ezingama-20, ungcoliseko olukhulu kakhulu iiyure ezingama-8. [amanqaku]: 1.Ukuba imaski yonakele, inyibilika okanye ayiphefumli kakuhle, nceda ubuyisele imaski kwangoko. 2. Sukuguqula, ukuhlamba okanye ukutshintshiselana ngezinto ezilahlayo ...
Imaski yokukhusela eyi-N95 iqinisekiswe yi-FDA CE
[Uhlobo]: Uhlobo lwendebe yohlobo lwefolding [Ukusetyenziswa]: Yinxibe inkungu kunye ne-haze, isithuthi esiphumileyo, ikhitshi, njl njl. [Umsebenzi]: Hlunga ngokufanelekileyo zonke iintlobo zamasuntswana emoyeni. [Sineziqinisekiso]: FDA / CE / Inxalenye yesikhundla se-NIOSH [Ixesha]: Ukungcoliswa komoya-iiyure ezingama-40, ungcoliseko olunobuncinci -yure ezingama-30, Ungcoliseko olunzima-iiyure ezingama-20, Ungcoliseko olunzima-iiyure ezi-8. [amanqaku]: 1.Ukuba imaski yonakele, inyibilika okanye ayiphefumli kakuhle, nceda ubuyisele imaski kwangoko. 2. Sukuguqula, ukuhlamba okanye ukutshintshiselana ngezinto ezilahlayo ...
[Uhlobo]: GM1-AM GM1-BM [Ukusetyenziswa]: Yinxibe inkungu kunye ne-haze, isithuthi esiphumileyo, ikhitshi, njl njl. [Umsebenzi]: Hlunga ngokufanelekileyo zonke iintlobo zamasuntswana emoyeni. Dibana nomgangatho we-GB / T 32610 -2016. [Sineziqinisekiso]: I-FDA / i-CE [Ixesha]: Ukungcoliswa komoya-iiyure ezingama-40, Ungcoliseko olunobungakanani-30yure, Ukungcoliseka okunzima kwe-20yure, Ungcoliseko olunzima-iiyure ezi-8. [amanqaku]: 1.Ukuba imaski yonakele, inyibilika okanye ayiphefumli kakuhle, nceda ubuyisele imaski kwangoko. 2. Sukuguqula, ukuhlamba okanye ukutshintshiselana ngenkunkuma ...
I-Dz95 imaski yabantwana inguqulelo